1. Mara mma yi swiiti Rich uto Na ihe dị iche iche Ma mgbe ha jikọtara ọnụ, anyị na-ekwu maka fudge. A menu ọtụtụ ndị nwere ike iche na ọ siri ike. Achọkwala itinye ihe egwu Mana buru ya n'uche, ọ bụ menu dị mfe ịme. Achọghị na mgbagwoju anya Ọ bụ ihe eji megharịa ọnụ nke ụmụaka ga-eri ma rie ọzọ n’adaghị agwụ ha ike. Mgbe nke ahụ gasị, bịanụ nwee obi ụtọ ọnụ. Yana usoro ime fudge nke onye obula puru ime. Na ngwakọta nke chocolate na mmiri ara ehi Enwere ike ịkpọ ya udidi nke eji megharịa ọnụ, ọdịdị nke fudge udidi Nke a ga - enye gị uto dị nro ma dịkwa mma, zoro ezo na ekpomeekpo chocolate na ezigbo fudge, enweghị usoro mgbagwoju anya na ihe ndị mejupụtara. Ọ bụ ihe eji megharịa ọnụ nke ụmụaka hụrụ n'anya ma hụ n'anya karịsịa. Mgbe nke ahụ gasị, ka anyị dozie ihe ndị ahụ. Ngwa dị mfe na akụrụngwa, mana uto ahụ abụghị ihe pụrụ iche.
2. Fudge kedu ụdị eji megharịa ọnụ kpọmkwem? 1 ngaji nke mmiri ara ehi gwakọtara agwa (14 oz)
3. 3 iko nke Milk Chocolate Chips
4. Gba na akwukwo nri mmanụ ma ọ bụ butter
5. Ngwongwo ladle
6. Achịcha chọkọletị
7. Akwụkwọ Freud
8. Otu esi eme fudge, dị ụtọ, nke na-atọ ụtọ • Wụsa mmiri ara ehi na-atọ ụtọ n'ime efere a kwadebere • Mgbe ahụ tinye Milk Chocolate Chips n'ime nnukwu efere ahụ • Mgbe ahụ ghaa ha niile. Ọ na-etinye na ngwa ndakwa nri na elu okpomọkụ Ọ na-ewe ihe dị ka nkeji 1. • Bee akwụkwọ Freud na traktị achịcha dị njikere. Mgbe ahụ fesaa mmanụ ihe oriri ma ọ bụ tinye obere bọta na-enweghị atụ. Nke mere na chocolate anaghị arapara na freud iji mee ka ọ dị mfe iwepụ.
9. • Wunye chocolate n'ime pan ma ọ bụ ebu. Jiri ladle iji hichaa ihu ezigbo. Mgbe ahụ tinye ngwakọta n'ime friza maka ihe dị ka awa 2 ruo mgbe ọ ga-ajụ oyi.
10. • Mgbe refrjiraeto ruo awa 2, wepụ ya na ebu ahụ. Mgbe ahụ wepụtara ya, bee ya na ogwe osisi, ma ọ bụ bee n'ime iberibe iberibe mgbe ejiri ya na shuga shuga. Ma ọ bụ obere shuga flake Iji mee ụtọ uto ahụ, tinye ya n'elu fudge. Naanị nke a bụ ihe ụtọ.Fudge bụ nri nke enwere ike ịkwadebe maka nnọkọ ahụ tupu oge eruo. Maka na enwere ike ịchekwa ya na friji Karịsịa maka oriri na ụmụaka ma ọ bụ dị ka nri dị ụtọ mgbe nri abalị. A na-ahọrọ ya maka ọrụ dị mfe na ụtọ ụtọ Ma ọ bụ ijere ndị ọbịa ozi n'oge kọfị na tii, nke kwekọrọ n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị mmanya ọ drinksụ hotụ niile Na mgbakwunye, inwe ike ime ya n'onwe gị nwekwara ike ịgbakwunye ihe ụtọ na uru sitere na ọka, mkpụrụ ma ọ bụ mkpụrụ osisi mịrị amị. Mee ya fudge pụrụ iche site na ihe ndị gbara ya gburugburu, wee mee ka fudge dị na friji maka ndị ọbịa ma ọ bụ ndị ọzọ !!